Akụkọ - Ọmụmụ: Mkpụrụ osisi akpọnwụwo, akwụkwọ nri gafere $ 60B site na 2025
Mkpụrụ osisi oyi
Ọmụmụ: Mkpụrụ osisi akpọnwụwo, akwụkwọ nri gafere $ 60B site na 2025
Ọnwa Nke Anọ 11, 2019
KEYWORDS kpọnwụrụ akpọnwụ mkpụrụ osisi / akwụkwọ nri a kpọnwụrụ akpọnwụ / mkpụrụ oyi kpọnwụrụ / mkpụrụ osisi kpọnwụrụ akpọnwụ / mkpụrụ osisi friji na akwụkwọ nri / akwụkwọ nri friji / akwụkwọ nri oyi / mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri / Global Market Insights
Asia Pacific bụ nnukwu ụlọ ahịa na-eto eto maka mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri a kpọnwụrụ akpọnwụ.
Ahịa mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi a kpọnwụrụ akpọnwụ ga-akarị ijeri $ 60 site na 2025, dị ka akụkọ nyocha ọhụụ ọhụrụ nke Global Market Insights, Shelbyville, Del si kwuo.
Popularitybawanye ewu ewu nke nri esi nri ga-abụ isi ihe na - akpata mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri akpọnwụ akpọnwụ. A na-eji ngwaahịa a eme ihe n'ụzọ na-akwadebe ọtụtụ nri nri ejiri sie ike dịka ofe, ihe ọ juụ juụ, nri dị njikere iri nri, wdg. Uru nke ngwaahịa a karịa mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ ga-eme ka mmepe ụlọ ọrụ na-ebuwanye ibu n'afọ amụma. Uru ndị ọzọ gụnyere ndụ dị mma karị, njigide dị elu nke njide ihe ndị na-edozi ahụ, ụcha na udidi na ike rehydration dị mfe. Ihe ndị a, tinyere mmepe na teknụzụ ihicha, ga-eme ka mkpụrụ osisi na ifriizi na mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi na-eto eto na afọ amụma.
N'aka nke ọzọ agbanyeghị, amataghị maka ngwaahịa a ga-egbochi mmepe mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na ifriizi. Ọ bụ ezie na a na-eji ngwaahịa ahụ n'ọtụtụ nri nri, ọkwa nghọta n'etiti ndị na-azụ ahịa banyere uru ya ka dị ala, ọkachasị na Asia Pacific na Latin America, ebe a na-eri mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ n'ọtụtụ dị oke mkpa.
Ifriizi-Fikiere mkpụrụ osisi na akwukwo nri iberibe, iberibe ma ọ bụ mpekere na-eji na a dịgasị iche iche nke nri na ngwaahịa ndị dị ka confectionaries, ofe, na-eme achịcha, nri igbe, wdg The nke ga-aha a revenue nke ihe dị ka $ 30 ijeri site na njedebe nke amụma afọ .
Ndị na-ere ntanetị n'ịntanetị na-enweta nnukwu ewu ewu na afọ ndị na-adịbeghị anya. Ndị na-eri nri na-atụ ịtụ ahịa ngwaahịa nri na ntanetị n'ịntanetị n'ihi ọtụtụ ihe dị ka ndụ ndụ siri ike, nnweta ngwaahịa dịgasị iche iche na ikpo okwu nkịtị, ịdị mfe nke ịkwụ ụgwọ na ịbawanye intaneti na akụ na ụba na-emepe emepe. Ọwa a na-ekesa ga-enweta ahịa site na CAGR nke gburugburu 6% na afọ amụma.
Asia Pacific bụ nnukwu ụlọ ahịa na-eto eto maka mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri a kpọnwụrụ akpọnwụ. Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu, ịba ụba ego mkpofu na ntinye nke ụdị mkpọsa dị iche iche bụ isi ihe kpatara mmepe nke Asia Asia ahịa, nke ga-edebanye aha ego karịrị $ 15 ijeri na njedebe nke afọ amụma.
Lumei obodo, Changqiao obodo, Zhangpu county, Zhangzhou, Fujian, China
Nri IQF nwere ike buru ihe ngosiputa diri ...
Ọmụmụ: Ifriizi-Fikiere mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri ma ...
Ọmụmụ: Grow na-eto eto maka nri na-emebi emebi ...